Kubavule amehlo ukudliwa yiPirates | Isolezwe
Kubavule amehlo ukudliwa yiPirates
Isolezwe / 2 August 2012, 12:39pm /
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - AUGUST 01, Josta Dladla during the Mamelodi Sundowns and Kaizer Chiefs joint press conference at the PSL Offices on August 01, 2012 in Johannesburg, South Africa Photo by Lefty Shivambu / Gallo Images
USEVEZE ukuthi ukudliwa yizimbangi zabo ezinkulu, i-Orlando Pirates, kubavule amehlo umdlali wasesiswini weKaizer Chiefs uJosta Dladla.
Ukhuluma kanjena nje lo mdlali iChiefs idliwe kabuhlungu isithembile ngesikhathi ibhekene nePirates emdlalweni weCarling Black Label Cup lapho ishaywe khona ngo 5-4 kumaphenathi kulandela igoli likaBenni McCarthy alishaye ngomzuzu wokugcina yalinganisa iBucs.
AmaKhosi anomunye umdlalo onzima ngeSonto lapho ezobhekana khona neMamelodi Sundowns koweMTN 8 quarter final eLoftus Stadium, eTshwane.
“Emdlalweni wethu nePirates sidlale kahle sase siyalala ngasekugcineni umdlalo usuzophela. Lokhu kwenze ukuthi basebenzise lelo thuba ukuthola ithola igoli lokulinganisa elisifake enkingeni. Leli goli likaMcCarthy (Benni) lisithene amandla,” kusho uDladla.
“Besingalilindele ngempela ngalesi sikhathi alishaye ngaso uma ubheka umsebenzi onzima ebese siwenzile ngalolu suku. Sizosebenzisa loya mdlalo ukuthi sinqobe umdlalo wethu neSundowns ngempelaSonto. Sivuleke amehlo, ngeke sikuphinde esikwenzile kuPirates. Sizoya kulo mdlalo olandelalyo ukuyolwela ukunqoba.”
Uthe isikhala sikaTinashe Nengomashe, osanda kushiya kuChiefs, asibonakali esiswini ngoba kunabadlali abahle abathathe indawo yakhe.
“UNengomashe unesipiliyoni kodwa okwamanje mina angisiboni isikhala sakhe ngoba uNkosi (Siyabonga) ungidlalela kahle noReneilwe Letsholonyane kanti baxhumana kahle nami. NoNkosi ngeke usibukele phansi isipiliyoni sakhe, ungumakadebona ebholeni lalapha ekhaya kanti uke wadlala naseGermany,” kusho uDladla.
Khonamanjalo isibabuli somdlali weSundowns uSurprise Moriri uthe bafuna ukumangaza iChiefs kulo mdlalo wabo wangeSonto.
“Sizokwenza konke ekusemandleni ukuthi siqede le nto yokuthi thina sihlale sishaywa yiChiefs. Bazomangala ngoba sizowuthatha lo mdlalo bengalindele. Bangakhohlwa ukuthi njengoba nabo befuna ukuwina nathi kunjalo,” kusho uMoriri.
Uphinde wancoma abadlali abasha eqenjini wathi babukeka bethembisa kakhulu.
“Ngiyethemba ukuthi bonke abadlali abasayinisiwe bazoba wusizo eqenjini. U-Edward Manqele ubukeka engumuntu ozokwenza umonakalo uma sidlala neChiefs kanti noThamsanqa Sangweni ubukeka emuhle lapha esiswini,” kuphetha uMoriri.
ISundowns ikhishwe yiPirates kulo mqhudelwano kuma semi-final ngonyaka odlule njengoba neChiefs ishaywe yiwona amaBhakabhaka kowamanqamu.
Isiyonke imidlalo yeMTN 8 ngempelasonto imi kanje:
Pirates v Celtic (Orlando Stadium, 7.30pm)
SuperSport United v Free State Stars (Peter Mokaba Stadium, 3pm)
Sundowns v Chiefs (Loftus Stadium, 3pm)
Swallows v AmaZulu (Dobsonville Stadium, 3pm)